Mac ဘက်ထရီနှင့်၎င်း၏မြို့ပြပုံပြင်များ၊ | ငါက Mac ပါ
ပါပလော Aparicio | | MacBook, MacBook Air ကို, MacBook Pro, လဲ tutorial
၁၂ လက်မ MacBook ဘက်ထရီများ
နည်းပညာသည်တဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တိုးတက်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် SMS ပို့ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲရှိမာလ်တီမီဒီယာစင်တာတစ်ခုလုံးထံရှိခြင်းသို့သွားခဲ့သည်၊ နည်းပညာအသစ်များနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာယုတ္တိနည်းအရ၎င်းတို့လည်ပတ်ရန်စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီး၎င်းစွမ်းအင်သည်ဘက်ထရီမှဖြစ်သည်။ ပြproblemနာကဘက်ထရီများသည်သူတို့ပေးရသောနည်းပညာကဲ့သို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုသောစက်တိုင်းတွင်ရှိသည်။ Apple MacBooks သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များစွာရရှိပြီးနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များထက်ပိုပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာသတင်းအချက်အလက်မရှိခြင်း။ ၎င်းဝန်းကျင်ရှိဒဏ္explainာရီများကိုရှင်းပြရန်ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Apple laptop ဘက်ထရီ။
သို့သော်အခြေခံများနှင့်စတင်ကြပါစို့။ ဘက်ထရီကိုဘယ်တော့အားသွင်းရမယ်ဆိုတာကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုသည့်အချိန်မှာအားသွင်းမှာကိုကြောက်သောသူများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကိုမေ့ထားရမယ် ဤကဲ့သို့သောပြနာများသည်ဘက်ထရီအဟောင်းများတွင်တွေ့ရပြီး၎င်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပိတ်ထားပြီးနောက် Nokia 3310 ကိုအပြည့်အ ၀ အားသွင်းခဲ့ရသည်။ လက်ရှိတွင်သံသရာအပြည့်အဝကျိုးနပ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းဘက်ထရီများသည်ဤပြproblemနာမှမခံစားရပါ။ ငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာငါတို့သူတို့ကို load လို့ရတယ်.
1 အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ MacBook ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းထားမည်ဆိုပါကတစ်ဝက်အားသွင်းထားပါ
3 သင်၏ MacBook တွင်လက်တစ်လက်ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းကိုယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ...
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ MacBook ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းထားမည်ဆိုပါကတစ်ဝက်အားသွင်းထားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook ကိုသိမ်းဆည်းတော့မည်ဆိုလျှင်ရှုထောင့်ပေါင်းများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်စေလိုပါကသင့်လျော်သောအချိန်တွင်၎င်းကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိပါကဘက်ထရီသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ MacBook ကိုဘက်ထရီနဲ့အဆုံးသတ်ထားဖို့မလိုပါကသင်အရမ်းတိတိကျကျပြောစရာမလိုပါ။ အပြည့်အဝအားသွင်းမထားသကဲ့သို့အသေဘက်ထရီကိုပါမပါ လုံးဝ။
အကယ်၍ ဘက်ထရီမရှိသည့်အချိန်တွင်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားပါက၎င်းသည် ၀ င်နိုင်သည် အပြည့်အဝဥတု status ကို သို့မဟုတ်တစ်နည်းဆိုရသော် ပို၍ လွယ်ကူ။ ရှင်းလင်းစေရန်သူသေနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဘက်ထရီအားပြည့်သည့်အခါကွန်ပျူတာကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ထားပါက၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
ဒါဟာအစကအရေးကြီးတယ် ပျင်းရိသောပြည်နယ်များတွင်မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ ၎င်းတို့သုံးစွဲသည်နှင့်အနည်းငယ်မျှသာဤအခြေအနေများသည်ဘက်ထရီကိုသက်သာစေပြီးစားသုံးမှုကိုဖျက်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်ဘက်ထရီအားကုန်သွားပြီးလုံးဝဆေးရုံသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားမည့်နေရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည်စိုစွတ်သောနေရာမဟုတ်၊ အလွန်အေးလွန်း။ သိပ်ပူလွန်းခြင်းမရှိကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အဘယ်အရာကိုပိုပြီးအကောင့်ထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်32ºထက်မကျော်လွန်ပါ.
ဒါကိုခြောက်လကျော်ကြာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့လုပ်ရမယ် ခြောက်လတစ်ကြိမ်ဘတ်ထရီအား ၅၀% ကျော်အားသွင်းပါ။ ဘက်ထရီများသည်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုသော်ငြားလည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားပါက၎င်းကိုပြန်လည်မတုံ့ပြန်မီမိနစ် ၂၀ ခန့်အားသွင်းရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သည်းခံပါ။
MacBook ကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုပုံမှန်အခန်းအပူချိန်တွင်လုံခြုံစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပြနာများပိုများနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ရင် MacBook ကိုသိမ်းထားရမယ် အပူချိန်35ºထက်လျော့နည်းသို့သော်theရိယာနှင့်နှစ်၏ရာသီပေါ် မူတည်၍ အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook ကိုမြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မြင့်များသို့ထုတ်ဖော်ပါက၎င်း၏ထိရောက်မှုသည်အမြဲတမ်းကျဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တစ်နာရီမကုန်ဆုံးမီမိနစ် ၅၀ မှ ၅၅ မိနစ်အကြာတွင်ကုန်သွားလိမ့်မည်။
သင်၏ MacBook တွင်လက်တစ်လက်ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းကိုယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ...
စစ်ဆေးပါ မပူပါနဲ့။ အချို့ဖြစ်ရပ်များကိုအလှအပရှုထောင့်မှကြည့်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကွန်ပျူတာများကိုရှူရှိုက်ရန်ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအဖုံးများသည်ကိရိယာကိုပူလွန်းစေနိုင်သည်၊ အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မီးမဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အခန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့အပူချိန်မြင့်မားခြင်းသည်အလေ့အထအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလျော့ကျစေနိုင်သည်။ ။
Apple ကပြောခဲ့သည့်အတိုင်းစက်များနှင့်အတူ built-in ဘက်ထရီစံကိုက်ညှိမလိုအပ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သေတ္တာထဲမှထုတ်ယူသည်နှင့်ချက်ချင်းချိန်ကိုက်ပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၂၀၀၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှပုံစံများသာဖြစ်သည်။
၁၃ လက်မ MacBook (၂၀၀၉ နှောင်းပိုင်း) ။
MacBook Air ။
Retina display ပါ ၀ င်သည့် MacBook Pro ။
၁၃ လက်မ MacBook Pro (၂၀၀၉ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်း)
၁၇ လက်မ MacBook Pro (၂၀၀၉ အစောပိုင်း)
သင်၏ MacBook သည်ယခင်မော်ဒယ်များထက်အသက်ကြီးပြီးသင်ထူးဆန်းသောဘက်ထရီအပြုအမူကိုကြုံတွေ့ရပါက၎င်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါမည်။
Power Adapter ကိုချိတ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုအပြည့်အဝအားသွင်းတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ထရီညွှန်ပြချက်မီးပိတ်ပြီး adapter အလင်းပယင်းကနေအစိမ်းရောင်သို့လှည့်တဲ့အခါမှာဒါဟာ 100% အားသွင်းကြောင်းသိရလိမ့်မည်။
ပါဝါ adapter ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
ကျနော်တို့ adapter ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်နှင့်ကွန်ပျူတာအပြည့်အဝအားသွင်းပါစေ။
စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သည် updated operating system ကို။ အမှားအယွင်းအသစ်တစ်ခုနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်းမှန်သော်လည်းသတင်းများသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်မှုများပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုသည်ကိုယ်ပိုင်ပြonomy္ဌာန်းခွင့်ပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်တို့အားထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အကယ်၍ ကွန်ပျူတာသည်အာမခံအောက်တွင်ရှိနေစဉ်ပြproblemနာသည်ကြီးလေး။ ဖြစ်ပွားလျှင်၎င်းနှင့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် Apple ကထောက်ပံ့မှု ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြေတစ်ခုပေးတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုခေါ်ဆိုမှုအတွင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအဆိုးဆုံးအနေဖြင့်၎င်းကိုကွန်ပျူတာအသစ်နှင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook » Mac ဘက်ထရီနှင့်၎င်း၏မြို့ပြပုံပြင်များ
ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်ပြproblemနာသည်ပစ္စည်းကိရိယာမှထုတ်လုပ်သောအပူကြောင့်၎င်းသေဆုံးသည်၊ ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ဘက်ထရီကိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သည်ဟုသင်ပြောသကဲ့သို့၊ ဘက်ထရီ ၁၀၀% အထိအားသွင်းသည့်အခါပစ္စည်းအများစုသည်စွမ်းအင်ကိုသာထောက်ပံ့သည်။ လက်တော့ပ်။
သင်ကအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး၊ ဘက်ထရီနဲ့အပူတွေအများကြီးပြောဖို့သိပ်မရင်းနှီးဘူး၊ ဒါပေမဲ့အပူချိန်ထက်ရန်သူကပိုဆိုးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
Moise Robles ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Macbook pro ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ၀ ယ်ကတည်းကငါမှာဘက်ထရီသုံးလုံးရှိတယ်။ ငါပန်းသီးကိုတောင်းဆိုပေမယ့်သူတို့ကငါ့ကိုရှောက်သွား။ ငါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့မထင်ဘူး၊ သူတို့ကငါ့ကိုသူတို့အိုင်ယာလန်မှာစာတိုက်လိပ်စာပေးဖို့ပြောတယ်။ ဖောက်သည်တွေဒီလိုနည်းနဲ့ဆုံးရှုံးရတာရှက်စရာပါ။ ငါ Mac, ငါ့ဇနီးနှင့်ငါ့ကုမ္ပဏီအတွက်အတူတူပင်ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုသမှုပဲ။ အက်ပဲလ်ကဆုံးရှုံးသွားပြီ။ အခုသူတို့အမြတ်အစွန်းတွေများလာတယ်။
MOISES ROBLES သို့ပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြaနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ကျွန်ုပ် Mac ကိုခဏတာသုံးပြီး၊ desktop နှင့်ရိုးရှင်းသောရင်ခွင်တစ်ခုရှိသည်။ Mac Book Version 10.5.8 ဖြစ်သော nebra၊ အမှန်တရားကကျွန်ုပ်အားပထမ ဦး ဆုံးကျရှုံးမှုများကိုပေးသောပထမ ဒါပေမယ့်အစကတည်းကသို့သော်သို့သော်ငါ charger ကို ဆက်၍ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုတည်းသောအရာမှာအလင်းအမြဲတမ်းမဖွင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့အတူနှစ်နှစ်နေခဲ့ပြီးဒီလမှာအားလပ်ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပြန်သွားတဲ့အခါပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဖွင့်ထားတာမအားမသွင်းထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ် သာမန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၈ နာရီထက်ပိုပြီးဆက်မထားမှီတိုင်အောင်၎င်းသည်ဘာမျှမအားသွင်းထားကြောင်းမသိခဲ့ပါ။ ၎င်းကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအားသွင်းသည့်ရာခိုင်နှုန်းပေါ်လာသည့်အပေါ်သို့၊ "အားသွင်းခြင်းမရှိပါ"၊ ၃ ရက်ကြာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဘာလုပ်နိုင်လဲ။
Beatriz, MagSafe ပေါ်ရှိအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်အလင်း၏ပြcomputersနာသည်များစွာသောကွန်ပျူတာများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးသင်၏ပြproblemနာသည်ဖြစ်ပျက်ရာနှင့်ပင်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။
သင်၏ MacBook ဘက်ထရီကုန်သွားပြီဖြစ်သော်လည်းအောက်ပါတို့ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။
1.- magsafe charger ကိုဖြုတ်ပြီးဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပြီးပြန်ထည့်ပါ။ ဖြစ်ပျက်မှုများကိုကြည့်ရှုရန် charger ကိုဆက်သွယ်ပါ။
၂။ Macbook ကိုပိတ်ထားပြီး bep မကြားမချင်း power ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် firmware ကိုပြန်လည်စတင်ကာဘက်ထရီတွက်ချက်မှုပြoutနာကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
0 နီးပါး "မရှိသောဘက်ထရီ" သို့မဟုတ် "အများဆုံးဘက်ထရီအားသွင်းမှု" ဟုပြောလျှင်၎င်းကိုသင်ပြောင်းလဲသင့်သည်။
အဘိဓါန် Lau ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ရဲ့ဘက်ထရီကိုဖြုတ်လို့မရဘူး၊ အလင်းကအစိမ်းရောင်ရှိနေပေမယ့် "ဘက်ထရီအားမသွင်းတော့ဘူး" လို့သတိပေးလိုက်တယ်။ ငါကွန်ပျူတာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဘဲထားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးနိုင်မလား ??? ငါပြီးသားအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ ... 🙁
Mac နဲ့ကျွန်တော့်ကိုမဖြစ်နိူင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပျက်လာတယ်။ ငါလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကငါ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ မနေ့ကကတည်းကဘက်ထရီအားမပြည့်ပါဘူး၊ ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ငါ့ဘက်ထရီသေသွားပြီလား ငါဘက်ထရီအတွက်မေးမြန်းပြီးသူတို့ကငါဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်ငါ့ကိုသူတို့ပြောတယ်, ဒါပေမယ့်သူကဝက်အူလှည့နှင့်အတူမပါလျှင်နောက်ကျောအဖုံးကိုဖွင့်လို့မရပါဘူး ... ..
ငါအုန်းသီးချွတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ငါ့ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ....
Boot Sound (chaaaaan) ကြားတဲ့အခါ CMD + ALT + P + R ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ဘာမှမပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသင်တွေ့မြင်ပါကပိတ်လိုက်သည်၊ အသံထွက်သည်အထိအသံထွက်သည်အထိခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် jaca 101!
အမှန်တရားကတော့ဒါဟာအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုလိုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လုံးဝပိတ်ထားပြီးဘက်ထရီကိုကျွန်တော်အားသွင်းနေပါတယ်။ အခုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နေပါတယ်၊ သတိထားပါလိမ့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်ထူးဆန်းပုံရတယ် ငါစားပေမယ့်ငါ့ကိုဒီလောကမှာမပတ်သက်ဘူး၊ ငါလည်းနားမလည်နိုင်ဘူး
jaime rosales ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ် Mac ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားတိုင်းပြည်မှဆွေမျိုးများနှင့်စကားပြောရန်၊ စကားပြောဆိုရန်အတွက် chat ကိုမည်သို့သုံးရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်ုပ်မှာ HM de Y ၏ messenger အကောင့်တစ်ခုရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သာရေးသားနိုင်ပါသည်။ ငါဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုလုပ်လို့မရဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးအကြံပေးချင်လား။
Jaime rosales အားပြန်ကြားပါ
@Jime, ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကယူရို ၂၀၀ သံမဏိဖြင့်သင်ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်သည်
Skype ကိုသုံးပါ။ http://www.skype.es
ကျွန်တော့်ရဲ့ macbook မှာပြသနာကအနက်ရောင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာပြသနာကကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကို charger နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ်၊ led က red and green စလင်းနေတယ်။ ခဏကြာရင် LED မီးသီးဘက်ထရီကိုငါဖယ်လိုက်ရင်၊ ဘယ်တော့မှပိတ်လို့မရဘူး ငါအရင်ကပြောခဲ့ဖူးတဲ့အကြံဥာဏ်ကိုကြိုးစားပြီးပြီးပြီ။ ငါဘက်ထရီကိုပြောင်းရမလား။ ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာထဲကတစ်ခုခုလား။
ကျွန်ုပ်၏ MAC စာအုပ်တွင်ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။ အိုင်တီအားပြောင်းလဲရန်ပထမအကြိမ် LED မီးစိမ်းသည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်အိုင်တီကိုချိတ်ဆက်ရန်အိုင်တီအနီရောင်ပျောက်သွားသည်။ အခြား Charger ဖြင့်ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအချိန်တိုင်းအစိမ်းရောင်ရလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မည်လားသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ခြေလှမ်းကိုချိုးနိုင်သလား။
အကယ်၍ charger သည်အနီရောင်ဖြစ်နေလျှင်၎င်းသည်အားသွင်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအပြည့်အ ၀ အားသွင်းသောအခါ၎င်းသည်အစိမ်းရောင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အခြားအားသွင်းစက်တစ်ခုသည်အားသွင်းစရာမလိုဘဲအစိမ်းရောင်ပြောင်းပါက၎င်းသည်လက်ပ်တော့ပ်အားထိန်းထားစဉ်အားသွင်းရန်လုံလောက်သောစွမ်းအားကိုမပေးသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၌လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က ၀ ယ်ခဲ့သော macbook pro သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဝယ်သော charger နှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ရုတ်တရက်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊ ၎င်းသည် charger များသို့မဟုတ်ဘက်ထရီဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းမသိတော့ပါ နှင့်၎င်းကိုအားသွင်းပါက charger သည် ဆက်၍ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သို့မဟုတ်လက်ပ်တော့တွင်ဗို့အားသေးသေးလေးအချို့ရှိပြီးအရင်းအမြစ်အလွန်အကျွံဖိအားဖြစ်စေသောနေရာ၌၎င်းဗို့ဗို့အားဖြတ်တောက်သည့်ကွန်ယက်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဒီနေ့ငါဝင်လာပြီ၊ မင်းငါ့ macbook pro ရဲ့ဘက်လိုက်မှုလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ငါဘယ်လိုထွက်ရမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ရုတ်တရက်သူပိတ်သွားတယ်၊ ပြီးတော့ငါဖွင့်လိုက်တော့ဘက်ထရီကိုငါအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတာကအားသွင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် ကျွန်တော့် Mac ရဲ့ဒီအချိန်ကကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ငါအဲဒါကိုပိတ်လိုက်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုတော့ဒီထက်နည်းသွားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြေတစ်ခုရှိလာမလား။
မေးခွန်းတစ်ခုမှာ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘက်ထရီကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ MacBok (အဖြူရောင်) ကကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းသောအခါ၊ ၎င်းသည်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ချိန် ၂- ၃ ပတ်ကဲ့သို့၎င်း၊ ဘက်ထရီအသစ်ကိုထည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ macbook ကိုမဖွင့်ဘဲကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီခန့်အားသွင်းပြီးတစ်ညလုံးမဆက်သွယ်ဘဲထားခဲ့ပြီး၎င်းကိုမဖွင့်ပါ၊ ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ငါပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမ .. ကကူညီပေးသည်
ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားသည့်အခါကျွန်ုပ်၏ 13p MacBook Pro ဘက်ထရီသည်ဘာကြောင့်အားကုန်သွားကြောင်းတစ်စုံတစ် ဦး ကပြောနိုင်ပါသလား။ ဒါပုံမှန်လား ??
ဟယ်လို! ငါ့မှာ PowerBook G4 တစ်နှစ်ရှိပြီးတစ်စုံတစ်ခုဟာဗီရိုထဲမှာရပ်ထားတယ်။ အခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘက်ထရီကအားသွင်းစရာမလိုဘူး၊ power cable ကိုဖယ်ထုတ်တိုင်း pb clock ပြန်လည်ညှိတယ်။
Coconutbattery ကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် - လက်ရှိဘက်ထရီအားသွင်းမှု - ၅mha
မူရင်းဘက်ထရီစွမ်းရည်: -1 mha
သံသရာအားသွင်း:0သံသရာ
သူဘာဖြစ်သွားမလဲ။ : /
မင်္ဂလာပါကောင်းသောညကျွန်ုပ်၌ mac pro တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုမီးထဲထည့်လိုက်သောအခါအစိမ်းရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့်အားသွင်း။ မရပါ။
ငါ့မှာ mac pro ရှိတယ်၊ ငါ mac ကို battery မှာသုံးတယ်။ ၁၀% ရောက်သွားတဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုအရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ငါအားသွင်းလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ၉၉ ကျော်ကျော်သွားပြီ။ % and charger light သည်အစိမ်းရောင်မှအဝါရောင်သို့ပြောင်းသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် charger ကို disconnect လုပ်ပါကအော့ကက်တထရစ်အားဖြုတ်ပြီးအရာခပ်သိမ်းကောင်းမွန်သည်။ အချို့သောဖြေရှင်းနည်းများ၊ ငါ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ပြီးပြီ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ငါ့ကိုကူညီပေးပါ !!!
မင်္ဂလာပါ ... ကျွန်ုပ်တွင် MacBook Pro ပါ ၀ င်ပြီးဘက်ထရီအားပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဘက်ထရီနှင့်သို့မဟုတ်မပါ ၀ င်တော့ပါ။
Miguel Gés ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က MacBook Air 13 I5 ကိုကျွန်ုပ်ဝယ်လိုက်သည်။ ဘတ်ဂျက်သည်၎င်းကိုပိတ်ထားသည့် application ကိုဖွင့်လိုသောအခါ ၁၀၀% အားသွင်းသည်။ Mac ကိုဖွင့်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အားသွင်းသည့်အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးမပြုဘဲပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့မှုမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည် ပြ,နာများ၊ ဘက်ထရီသည် ၄၊ ၇ နှစ်နှင့် ၇၇၄ သံသရာရှိသည်။ ပြီးပါပြီလား? အမှတ်တရများမှဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပြီးအတူတူပဲ
Miguel Ges သို့ပြန်သွားပါ
ငါ Macbook ကွန်ပျူတာကနေဘက်ထရီကိုဖယ်လိုက်ရင်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် windows laptop လို ac power နဲ့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်
andres felipe သို့ပြန်သွားပါ
အဆိုတော် Marilyn ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! ငါ့မှာ MacBook Air ရှိတယ်၊ ငါ့မှာပြtheနာက charger နဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုအားသွင်းချင်သောအခါ charger သည်အဝါရောင်အလင်းကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးဆန်းနေပုံရပြီးယခုအချိန်တွင်မည်သည့်အလင်းကိုမှမသွင်းပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Mac Air ရှိပြီ၊ ဘက်ထရီအရမ်းမြင့်တယ်။ ငါယူပြီးအသစ်တစ်ခုရတော့မယ်။ ပစ္စည်းကိုဘက်ထရီမပါဘဲ ဆက်၍ အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဘက်ထရီအသစ်ကိုစောင့်ရန်အကြံပြုလိုပါသလား။
လီလီယာနာ ဒီဟေဇာ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် mac ဖောင်းလာပြီး charger ထဲကိုသာချိတ်လို့ရတယ်။ ဘက်ထရီသေသွားပြီလား။ အဘယ်ကြောင့်ဖောင်းခဲ့သလဲ
liliana deheza အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ charger ကိုချိတ်ဆက်နေစဉ်အတွင်းကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်နာကျင်မှုရှိမရှိသိချင်ပါတယ်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအပြည့်အစုံကို Safari တွင်ကြည့်ရှုရန်